Xariirka Kubbadda Cagta Soomaaliya oo is badal weyn ku sameeyay safka xulka qaranka %
Xariirka Kubbadda Cagta Soomaaliya oo is badal weyn ku sameeyay safka xulka qaranka
By Ramzi Yare	 Last updated Sep 16, 2019
Xariirka Kubbadda Cagta Soomaaliya oo is badal weyn ku sameeyay safka xulka qaranka ayaa wacadaro kusoo bandhigay is reeb reebka koobka aduunyada,ka dib markii uu xulkeena laba kulan la dheelay Zimbabwe.
Inta ugu badan waxaa la isku raacay in xulka qaranka lagu sameeyay is badal weyn hadii lasii joogtayna ay sahli karto sanadaha soo aadan ee qarankeena gaaro meel aad u wanaagsan tartamada caalamka.
Xariirka Kubbadda cagta Soomaaliya ayaa Said Abdi Haibeh u magaacabay wakiilka soo aruuriyay xidigaha idin muuqda,isagoo balan qaaday in iminka uu raadindoono dhallinyaro kale oo ku kala nool caalamka una baahan in ay mataalaan wadankooda qeyna ka qaata horomarka.
“Waxaa iga go’an oo in wax badan ka badalo heerka xulka qarankeena ajandahayga howshan waa in aan dalkeena sanadaha soo aadan uu soo tiigsadaa kaalamaha dhexe ee dunida” ayuu ku waramay wakiilka xariirka kubbadda cagta Soomaaliya Said Abdi Haibeh .
Maxay kula tahay hadii leysku haayo dhallinyaradan oo kaashanay kuwa gudaha iyo kuwa oo lagu biiriyo,maxaase ka rajaynaysaa mustaqbalka awooda iyo xirfada safkan.
Mogadishu City Club Oo Saakay Soo Bandhigtay Ciyaar yahaankii Hore Dekedaha Feysal Xaashi